Maleeshiyaad Shabaab ah oo ku Halaagsamay Qarax ay diyaarinayeen – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Maleeshiyaad Shabaab ah oo ku Halaagsamay Qarax ay diyaarinayeen
By aaheybe / June 17, 2019 June 17, 2019
Muqdisho(SONNA):- Wararka naga soo gaaraya deegaanka Bariire ee Gobalka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in labo ka tirsan Maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen halkaas, ka dib markii ay ku qarxeen Waxyaabaha Qarxa oo ay diyaarinayeen.
Wararka ayaa sheegaya in labadaan Dhagarqabe Guri ku yaala deegaanka ay ku diyaarinayeen Qarax oo ay doonayeen inay shacabka ku dhibaateeyaan, laakiin ayaga ay ku halaag sameen ugu dambayn.
Dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay inay arkayeen laba nin oo Meyd ah oo laga soo saaray guriga ku yaala deegaanka oo uu ka dhacay Qaraxa.
Sidoo kale Ciidanka Dowladda ee ku sugan deegaanka Bariire ayaa gaaray halka uu ka dhacay Qaraxa oo ay ku geeriyoodeen Maleeshiyaadka Argagixisada ah dhibaatadii ay la doonayeen shacabka ay iyaga ku habsatay.
Si kastaba ha ahaatee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa mudooyinkii ugu danbeeyay laba laabay howlgalada aadka u balaaran ee ka dhanka ah Al-Shabaab ee laga samaynayo Gobalka Shabeellaha Hoose, iyadoo deegaano dhowr ah Argagixisada haatan laga saaray.